Nkọwapụta --lọ ọrụ - Union Precision Hardware Co., Ltd.
Okwu Mmalite nke Otu
Union nkenke Hardware Co., Ltd. bụ Taiwan dabeere ụlọ ọrụ e guzobere na 1980, nke bụbu ụlọ ọrụ bụ "Union Spring Metal Co., Ltd." na headquartered na Huizhou nke China na 1998. Dị ka mmụba nke mmepụta ọnụ ọgụgụ na ahịa ahịa, ụlọ ọrụ ahụ kwagara mpaghara mmepụta ihe ọhụrụ 20000㎡ site na 2008, wee gbanwee aha ahụ "Union Precision Hardware Co., Ltd.". Anyị guzobere ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme n'akụkụ China niile iji zute ihe ndị ahịa chọrọ. Emesịa Union Metal injection ịkpụzi (MIM) otu e hiwere na 2010, ma gafere ISO 9001: 2008, NT 14R00 14001: 2004 na ISO / TS 16949: 2002 ga-agafe na 2017.
The Spring Dept. ọkachamara na n'ichepụta mmiri dị iche iche, mmiri pụrụ iche pụrụ iche na dome elektrọnik. The ngwaahịa Njirimara kpọmkwem n'ichepụta na pụtara ìhè mma, na na ọdabara maka mba na-agbachitere ụlọ ọrụ, moto ụlọ ọrụ, hi-tech electronic ngwaahịa, na nkwukọrịta, n'ụlọ nkiri ngwa, ji egwuri egwu, anyịnya, na multi-ọtọ ngwa nbipute wdg Anyị na-etu ọnụ nke pụtara ìhè mmepụta ikike ma nwee ike n'ichepụta ụdị isi iyi niile na eriri waya dị iche iche sitere na 0.05mm-6.0mm na mpụga mpụga sitere na 0. 3mm-80mm. A na-ejikọ ngwaahịa ngwaahịa Union-mmiri site na itinye igwe kọmputa na akụrụngwa ule yana sistemụ njikwa kọmputa kọmputa DCS di elu. Ikpokọta otu narị igwe igwe kọmpụta na ọtụtụ Japanese ọhụrụ MEC, ITAYA usoro igwe mmiri, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike imepụta ihe kachasị mma na isi mmiri iji zute ọtụtụ ndị ahịa chọrọ. MIM Dept - Anyị na-eji akụrụngwa a maara nke ọma dịka igwe eji agba ịnyịnya Germany ARBURG, Japan Shimadzu na-eme oku. All nke akụrụngwa anyị na-ahọrọ dị ka Germany BASF, American CARPENTER, na Japan MITSUBISHI. Brandsdị ndị a niile na-enye ezigbo nkwụsi ike yana ezigbo ihe onwunwe. Mmepụta ike nwere ike na-ekpuchi n'èzí dayameta si 6mm ka 90mm. Ọ bụ na ezigbo n'ichepụta usoro iji nweta mgbagwoju na nkenke akụkụ na nnukwu ibu. Kedu nke metụtara ụlọ ọrụ na-esote dịka teknụzụ wearable, ekwentị, mbadamba, ntị ntị ụdị ngwaahịa 3C ndị a maka ngwa, gia ụdị ngwaahịa a.
Ọnwụ na-arụ ọrụ chere banyere "ọhụrụ, mmepe na afọ ojuju ndị ahịa". Tụkwasị na nke a, iji mezuo ihe ndị chọrọ maka mmepe ahịa ụwa, Union Manufacturing Engineering Dept. na-eme nchọpụta mgbe niile maka ịhapụ ego ma melite ogo, ma na-enye ngwaahịa nke 100% na-agbaso ụkpụrụ nke Japan Industry Standard (JIS) na American Society for Testing na Akụrụngwa (ASTM), na isi ụlọ ọrụ mmepụta ihe chọrọ ngwaahịa dị iche iche. Ngwaahịa anyị enwetala obi ike dị ukwuu site na ụlọ ọrụ ndị ama ama na Japan, America na South Korea. Ndị ahịa nke ụlọ ọrụ anyị gụnyere ụlọ ọrụ ndị ụwa ama ama dịka Foxconn, Kinpo Electronics, Sint, Amer, Primax Electronics, Epson, Nwanna, Kyocera, Canon, Lexmark, Sony, RicohNikon, Defond Group wdg.
Union kwere nkwa itinye aka na mmepe ụlọ ọrụ gị, ma na-atụ anya ka ị nweta mmepe mmepe yana gị na ọdịnihu dị mma. Nabata na ụlọ ọrụ anyị.
Mba .5 Chaoyanger Rd, Shiwan Town, Huizhou City, Guangdong Province, 516127 China
Ekwentị: + 86-139-2731-9288
Nweta Akwụkwọ Ihe osise efu